ARCORA kichin foset isi isi G1 / 2 njikọ - arcorobinet
Welcome / ngwa / Foset ngwa / ARCORA Kitchen Foset Sprayer Heads G1 / 2 Njikọ
Onye na-agba sprayer nwere àgwà nke corrosion, ịkọ na mgbochi ọgụ, nke enwere ike iji maka ogologo oge. Zuru oke maka ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ebe ntụrụndụ, na mmepe ụlọ.
Rịba ama tupu ịzụta: Isi 5001 a bụ naanị maka njikọ G1 / 2 (MALE) (ihe dịka 2cm ma ọ bụ 0,8inch), ọ bụghị NPT, ọ bụghị ụwa niile.
Elu Ogo: Kitchen foset isi nnọchi ka nke engineering ọkwa plastic (ABS) na wuru na-Neoperl aerator, ike ga-eji ruo ogologo oge na-eji kwa ụbọchị, leghaara nickel imecha bụ mgbochi ajari na ọ dịghị mkpisi aka fọdụrụ.
3 CLỌ ỌR:: jetnọgide na-enye mmiri ugboelu na-asọpụta dị nro ma dịkwa nro, enweghị mmụba; mmiri ịgba nwere ike ihicha akwụkwọ nri ma ọ bụ mkpụrụ osisi na-eji ire ụtọ, ịgba ọsọ na-enweghị mmerụ; Waterkpụrụ mmiri mmiri Aqua / zachapụ agụba nwere ike ihicha sinks gị ngwa ngwa na ike dị ike.
Ọ dị mfe iji sachapụ: Elu igwe ABS dị elu nwere ike ghara ịhapụ ngwa ngwa site na mkpụrụ ego, enweghị mmiri siri ike na oke, na-echekwa ndụ na ụkpụrụ mmiri
Akwụkwọ ikike, Ahịa Nkwado: A na-enye akwụkwọ ikike afọ 2 na nkwado ndị ahịa. Ejiri 90 ụbọchị laghachi n'efu.
A pụrụ ịdabere na ntụkwasị obi site na ihe owuwu ahụ site na vinyl na-adịgide adịgide, mgbe ị na-agwụcha na nickel na-acha ọcha nke oge a.
Ọdịdị na-adịgide adịgide - Nrụgide plastik na-adịgide adịgide na-enye arụmọrụ a tụkwasịrị obi site na iji nickel gwụchara iji gbochie nchara ma ọ bụ nchara.
Akụkụ ahụ mapụtara maka ARCORA Pop Up drain nkwụnye
Akụkụ ahụ mapụtara maka ARCO drain plọg ...
ARCORA Pop Up lavatory igbapu na njupụta
Wall-n'ịnyịnya ARCORA akpaka ncha dispenser
ARCORA akpaka ncha dispenser na ...